Umenzi wezinto zokuncedisa impilo-i-Wisepowder BLOG
Yintoni iMagnesium L-threonate? I-Magnesium L-threonate (778571-57-6) ime njengeyona ndlela ifanelekileyo yokufumana iipilisi zemagniziyam kwintengiso yanamhlanje. I-Magnesium sisimbiwa esiqhelekileyo esinokubakho [...]
Kutheni sidinga iNicotinamide Mononucleotide (NMN) Nangona ukuguga kungenakuphepheka, kukho amathemba okubuyisela umva le nkqubo, enkosi kuNicotinamide Mononucleotide (NMN). Ukuhlala ebudaleni obudala liphupha lomntu wonke [...]
Xa uthelekisa iPterostilbene Vs Resveratrol, uyakuqonda ukuba zininzi iinyani olahlekileyo ngazo ezimbini. Ukuphila impilo esempilweni kufuna ukuba ubeke izimvo zakho kwi [...]
Yintoni irayisi ebomvu ilayisi ekhutshwe irayisi ebomvu irayisi isicatshulwa (RYRE) yenziwa xa uhlobo oluthile lwesikhunta esaziwa njengeMonascus purpureus ibila irayisi. Irayisi ibomvu ebomvu [...]
Yintoni i-Black Garlic Extract? Isicatshulwa segalikhi esimnyama luhlobo lwegalikhi oluvela kukuvundiswa kunye nokuguga kwegalikhi entsha. Unyango lwegalikhi entsha kunyango [...]
Yintoni iAnandamide (AEA)? Igama elithi Anandamide (AEA) livela kwigama elithi Ananda elithetha ukuba livelisa ulonwabo. I-endocannabinoid ehlelwe kwiqela lamafutha e-acid. Ulwakhiwo, [...]
I-Glutathione inceda izinto eziphilayo ngeendlela ezininzi ngokusebenza njenge-antioxidant. Yinkomfa ye-amino acid ekhoyo kwiseli nganye yomntu. Yonke into ephilayo ine-glutathione emzimbeni wayo. [...]
Yintoni iResveratrol? I-Resveratrol sisityalo sendalo se-polyphenol esisebenza njenge-antioxidant. Imithombo yeResveratrol ibandakanya iwayini ebomvu, iidiliya, amajikijolo, amandongomane kunye netshokholethi emnyama. Eli khompawundi libonakala liphezulu kakhulu [...]
Isikhokelo sokugqibela kwiQuercetin
Yintoni iquercetin? IQuercetin (117-39-5) yeqela leekhompawundi ezibizwa ngokuba zii-flavonoids. Igama layo leekhemikhali ngu-3, ​​3 ', 4', 5,7-pentahydroxyflavone. Yi-pigment ekhoyo ngokwemvelo kwimifuno emininzi, iziqhamo, [...]